Maamulka Hirshabelle oo yeelanaya Ciidamo CUSUB – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Maamulka Hirshabelle oo yeelanaya Ciidamo CUSUB
Maamulka Hirshabelle ayaa sheegay in ay dhisanayaan Ciidamo u gaar ah kadib markii Degaanada Gobolka Sh.Dhexe ay isaga baxeen Ciidamo ka tirsan kuwa Millateriga Soomaaliya.
Ciidamada militariga ayaa ujeedka ay uga soo baxeen furimaha Dagaalka waxey ku sheegeen mushaar la’aan muddo afar billood ah.
Wasiirka Warfaafinta Maamulka Hir-Shabeelle Cabdiweli Maxamed Cabdi ayaa sheegay in deegaanadii ay Ciidamada Millateriga kasoo baxeen ay geeyeen Ciidamo boolis ah, isla markaana ay caawinayaan Ciidamada AMISOM oo ku sugan deegaanadii ay ciidamada soo baneeyeen.
Waxa uu sheegay Wasiirka in ay rajeynayaan in dhawaan la bilaabo dhismaha Ciidamadaas u gaarka ah Maamulka Hir-Shabeelle, kadib soo bixitaankii Ciidamada Millateriga Soomaaliya ee deegaano ka tirsan Gobolka Shabeellaha dhexe.
Dhawaan ayay aheyd markii Maamulka Hir-Shabeelle markii ugu hgorreysay loo sameeyey Ciidamo boolis ah,kuwaas oo ka qeyb qaadanaya sugida amniga sigaar ah deegaanadii ay kasoo baxeen Ciidamada Dowladda.
Wararkii ugu dambeeyay Iska horimaad ka dhacay Muqdisho